Erling Haaland oo weli shaki weyn laga gelinayo kulanka soo aaddan ee Kooxdiisa Borussia Dortmund – Gool FM
(Dortmund) 03 Juun 2020. Erling Haaland ayaa weli shaki ku jiraa kulanka ku soo aaddan ee Kooxdiisa Borussia Dortmund sababo la xiriira dhaawac uu qabo, sida uu daabacay Wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka.
Borussia Dortmund ayaa heli doonin Weeraryahankeeda sare ee Erling Haaland kulankooda soo aaddan oo ay la leeyihiin Hertha Berlin.
Haaland ayaa ka dhaawacmay jilibka kulankii ay guuldarrada 1-0 ka soo gaartay Bayern Isbuucii hore, wuxuu seegay guushii Axaddii ay ka gaareen Paderborn dhaawacaas darteed.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Bild, xiddiga heerka caalami ee dalka Norway ayaa maqnaan kara muddo dheer, waxaana uu shaki weyn ku jiraa kulanka bilowga isbuuca soo socda ee ay la ciyaarayaan Hertha Berlin.
Wargeyska Bild ayaa sheegaya in Haaland uusan wali awoodi karin inuu ka qeyb qaato tababarka kooxda, isla markaana aanu ka qayb geli doonin tababarka kooxdu berri isugu imaanayso.
Maqnaanshaha Haaland ee kulanka Hertha Berlin waxay dhabar jab weyn ku noqon doontaa Dortmund, inkastoo uu 19-sano jirkaan seegay guushii 6-1 ee ay ka gaareen kooxda ugu hooseysa ee Paderborn, haddana kooxda Berliners ayaa soo bandhigi doonta tijaabo adag si ay guul u qaataan naadiga lagu naanayso Black and Yellows.